पुरानो कुकुरको हेरचाह पत्ता लगाउनुहोस्, यदि तपाईंको कुकुर ठूलो छ भने के गर्ने? | कुकुरहरु को विश्व
पुरानो कुकुरको हेरचाह गर्दै
सुसी फोंटेला | | सामान्य कुकुरहरु
को जेष्ठ उमेरका कुकुरहरू ती सात वा आठ बर्षको रूपमा पुरानो मान्न शुरू गर्न सकिन्छ। यो उमेर धेरै नाजुक छ, किनभने धेरै परिवर्तनहरू तपाईको शरीरमा हुन्छन्। यो चरणमा नै हामीले तपाईंको स्वास्थ्यको बढी हेरचाह गर्न सुरु गर्नुपर्दछ, जब यो धेरै जसो विकृतिविज्ञानहरू प्रकट हुन्छन्।
को पुरानो कुकुरको ख्याल राख्दै तिनीहरू हामी संग एक जवान कुकुर संग भन्दा अधिक लगातार छन्। सब भन्दा नाजुक चरणहरू कुकुरका बच्चा र वरिष्ठ वा बुढा कुकुरहरू हुन्। हामी तपाईंलाई केहि सुझावहरू दिदैछौं ताकि तपाईंको कुकुर वृद्ध भएमा उत्तम हेरचाह लिन्छ।
1 पुरानो कुकुर भनेको के हो?
2 वरिष्ठ कुकुरहरूका लागि खाना
3 पुरानो कुकुरमा शारीरिक गतिविधि
4 तपाईका जोर्नीहरूको ख्याल राख्नुहोस्
5 साधारण रोगहरु
6 धेरै प्रेम र स्नेह
7 पशु चिकित्सकलाई भ्रमण
पुरानो कुकुर भनेको के हो?
कुकुरहरू पुरानो मानिन्छ सात वा आठ बर्ष सामान्य रूपमा। यस चरणमा तिनीहरू प्रवेश गर्छन् जुन वरिष्ठ युग हो। स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ कुकुरहरू छन् जुन बुढेसकालमा देखिन्छन् र अन्य जुन पछि निश्चित युवा रहन्छन्। दश वर्षको उमेरदेखि तिनीहरू प्रायः वृद्ध मानिन्छ। यद्यपि, हामीहरू बारे कुरा गरिरहेका जातका आधारमा त्यहाँ केही भिन्नताहरू छन् किनकि साना नस्लहरूको ठूलो प्रजातिहरूको तुलनामा धेरै आयु हुन्छ, जुन प्राय बाह्र बर्षसम्म पुग्छ। कुकुरको जीवनशैली र यसले लिने हेरचाहले यसको जैविक युगलाई पनि असर गर्न सक्छ।
वरिष्ठ कुकुरहरूका लागि खाना
को वरिष्ठ कुकुराहरूको बिभिन्न आहार हुनुपर्छ, किनकि तिनीहरूको जीवनशैली यस चरणमा परिवर्तन हुन्छ। एकातिर, तिनीहरूको शारीरिक गतिविधि धेरै ड्रप, त्यसैले क्यालोरी को मामला मा मांग धेरै कम हो। वरिष्ठ फिडहरूमा कम फ्याट र कार्बोहाइड्रेट हुन्छन् ताकि कुकुरहरूले सजिलै तौल लिन नपरोस्। थप रूपमा, हामी एक कम क्यालोरी फिड पाउन सक्दछौं यदि कुकुरले स्वास्थ्य समस्याको कारण शारीरिक गतिविधि गर्न रोकिन्छ भने।
यदि यसको विपरित हाम्रो हो कुकुरले तौल घटाएको छ केहि रोगको कारणले तपाईको फिडलाई पपीहरूसँग मिस्याउनु राम्रो विचार हुन्छ, जससँग यी चरणहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न बढी फ्याट र क्यालोरी हुन्छ।
फिडहरू जुन उनीहरूलाई कल गर्दछन् वरिष्ठ प्रोटीन अधिक हुन्छ र यी कुकुरहरूको नयाँ आवश्यकताहरू पूरा गर्न फ्याट कम। जीवनको यस चरणमा उनीहरूलाई मांसपेशीहरूको द्रव्यमान राख्नको लागि प्रोटीन चाहिन्छ, त्यसैले यी फिडमा अधिक गुणस्तरको प्रोटीन हुन्छ। तर ती भिटामिनहरू र खनिजहरूले पनि बनाउँदछन्, ताकि कुकुरहरूलाई पोषक तत्वहरूको अभाव हुँदैन।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ उत्तम गुणस्तरको फिड किन्नुहोस्। यदि सम्भव भएमा हामीले फिड पाउनु पर्छ जुन प्राकृतिक खाद्य पदार्थले बनेको हुन्छ, किनकि हामी कुकुरलाई धेरै रसायनिक कम्पोजिसन खानेबाट रोक्छौं जसले अन्ततः उनीहरूलाई हानी पुर्‍याउँछ।
तपाईको खानामा ध्यान दिनको लागि अर्को कुरा हो हामीले दिनु पर्ने शटहरू। यस चरणमा तिनीहरूको पेट अधिक नाजुक हुन्छ र तिनीहरूलाई निरन्तर ऊर्जाको आपूर्ति चाहिन्छ। यसैले दिनभरि धेरै साना फीडिंग्समा उसलाई खुवाउन सधैं उत्तम हुन्छ।
पुरानो कुकुरमा शारीरिक गतिविधि
यस चरणले कुकुरको लागि परिवर्तन बदल्छ जुन सामान्य रूपमा क्रमिक हुन्छ। सामान्यतया, यो कुकुरको लागि सामान्य छ तपाइँको निद्रा र आराम को घण्टा बढाउनुहोस् र शारीरिक गतिविधि कम। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले कुकुरलाई उसको थकाउने गतिविधिहरू गर्न बाध्य पार्दैनौं, किनकि धेरैले मुटु वा भास्कुलर विकृति विकसित गर्दछन् जसले उनीहरूलाई हानी पुर्‍याउँछ।
El व्यायाम गर्नुहोस् जुन हामी कुकुरसँग गर्छौं सधैं मध्यम हुनुपर्छ, यसका सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै। हामीले कुकुरलाई निगरानी गर्नु महत्वपूर्ण छ यदि यो थकित हुन्छ भने यो वास्तविक समस्या हुन सक्छ यदि यसको कुनै प्याथोलॉजी छ भने। थप रूपमा, यसलाई तातो वा चिसो घण्टामा नहोर्नु राम्रो हो किनभने यो यी तापमान परिवर्तनहरूमा संवेदनशील हुन सक्छ।
बाहिर निस्कनु सधैं उत्तम हुन्छ छोटो हिड्दै कुकुर हिंड्ने र उहाँसँग धेरै गतिविधिहरू नगरी पिरियडहरू बीचमा आराम गर्न दिनुहोस्। यस तरीकाले कुकुरसँग जहिले पनि दैनिक जीवनको साथ जारी राख्नको लागि पर्याप्त ऊर्जा हुन्छ, हिंड्ने र अन्य कुकुरहरूसँग सामाजिकरणको आनन्द लिने।
तपाईका जोर्नीहरूको ख्याल राख्नुहोस्
जोडीहरू वरिष्ठ अवस्थामा वास्तविक समस्या हुनसक्दछ, किनकि कठोरता र अस्थिरिया देखा पर्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापलाई वेवास्ता गर्नुपर्दछ जसले गर्दा जोर्नीहरू दुख्ने छैनन्। तर थप रूपमा, आहार हुनु पर्छ ओमेगा3र ओमेगा 6। अर्कोतर्फ, कुकुरलाई अस्थिरोग सम्बन्धी समस्या हुन थाल्दा पशु चिकित्सकलाई भेट्न नियमित हुनुपर्दछ, किनकि हामीले उसलाई यो समस्या रोक्न केही औषधी दिन सक्छौं।
वरिष्ठ चरणमा केहि रोगहरु जुन सामान्य छ कुकुरहरु मा हिप डिसप्लासिया, जोर्नीहरूमा ओस्टियोआर्थराइटिस, मुटुको समस्या, र क्यान्सरसमेत सबैको लागि समस्या हुन सक्छ। किन कुकुरको समस्या बारे सचेत हुन यो महत्त्वपूर्ण छ।
धेरै प्रेम र स्नेह
घर भित्र हामी यो कुरा याद गर्नेछौं कि कुकुर सामान्यतया हामी बारे बढी सचेत हुनेछ। यो हुन्छ किनभने इन्द्रिय गुम्यो भने कुकुरहरूले अझ बढी असुरक्षित महसुस गर्छन्। यसैले उनीहरूलाई एक आवश्यक हुनेछ अतिरिक्त प्रेम र हेरचाह यस चरणको दौरान। यो सामान्य छ कि तिनीहरू हामीसँग बस्न चाहन्छन् र तिनीहरू पनि लामो समयसम्म घरमा एक्लै बस्न पाउँदैनन्। यो राम्रो छ कि उनीहरूसँग एउटा घर छ जुन घर भित्र सहजै छ, कुकुरको ओछ्यानसहित प्याड गरिएको छ जसको कारण उनीहरू अझ बढी आराम लिन सक्दछन्। यो नबिर्सनुहोस् कि यो चरणमा नै हड्डी र संयुक्त समस्याहरू सुरू हुन्छन्।
पशु चिकित्सकलाई भ्रमण
यदि त्यहाँ केहि कुरा छ जुन हामीले पुरानो कुकुरहरूसँग ध्यानमा राख्नुपर्दछ, यो त्यो हो पशु चिकित्सक भ्रमण तिनीहरू अधिक बारम्बार हुनु पर्छ। यो चरणमा यो हो कि धेरै अधिक विकृति र समस्याहरू देखा पर्दछन्, त्यसैले हामी कुकुरमा सबै प्रकारका परिवर्तनहरूप्रति सतर्क हुनुपर्दछ। चाहे तपाइँ खाना खान छोड्नुभयो, असन्तुष्ट बन्नुहोस्, आफ्नो सोच बदल्नुहोस् वा सूचीविहीन बन्नुहोस्, यी संकेतहरू हुन सक्छन् केही गलत छ। किन नियन्त्रणहरू यत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » पुरानो कुकुरको हेरचाह गर्दै
मसँग मेरो बक्सर कुकुर थियो जब उहाँ १२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एक महिना अघि मर्नुभयो उहाँ एक धेरै राम्रो कुकुर हुनुहुन्छ र म उसलाई कहिल्यै भुल्दिनँ, उनलाई क्यान्सर भएको थियो र सम्पूर्ण परिवारलाई गुमाउनुपर्दा धेरै गाह्रो भएको थियो।
मयकालाई जवाफ दिनुहोस्
युरेसियर कुकुर जात
कुकुरहरूका लागि पाँच गुणा खोप कुन हो?